Home / How to Overcome Your Fear
▪️ တခါတလေ ဘဝမှာ ကိုယ်လျှောက်လိုတဲ့လမ်း၊ ရောက်ချင်ပန်းတိုင် ရှိနေပါရက် ၊ ကြိုးစား သွားချင်ပါရက်နဲ့ မဖြစ်နိုင်လောက်မှာ ကျရှုံးသွားမှာ ကြောက်ပြီး နောက်ဆုတ်လိုက်တာမျိုး ရှိခဲ့ဖူလား ?
▪️ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုချမှတ်တိုင်း မှားသွားမှာ၊ လွဲချော်သွားမှာ၊ လမ်းကြောင်းလွဲသွားမှာစသည်ဖြင့် စစ်မရောက်ခင် မြှားကုန်ပြီး လက်လျှော့လို်က်တာတွေ ရှိဖူးလား?
▪️ ရှိခဲ့ဖူးတယ်ဆိုရင်တော့ သေချာတာက သင့်မှာ Fear of Failure ( ကျဆုံးရမှာ ကြောက်ရွံခြင်း) ဆိုတဲ့ “Atychiphobia” တစ်မျိုး ရှိနေတာပါ။
▪️ လူတိုင်းက တော့ ကျရှုံးမှာကြောက်ကြတာချည်းပဲ။ ဒီလို စိတ်ရှိနေတာက မမှားပါဘူး။
▪️ တကယ်တမ်းမှားယွင်းနေတာကတော့ ဒီကြောက်စိတ်ကို ကိုင်ဆုပ်ထားပြီး ဘဝရဲ့ တက်လမ်းတွေကို ကိုယ်တိုင် ပိတ်ပင်နေတဲ့ အကျင့်ကပါ။
▪️ သုတေသီတွေရဲ့ အဆိုအရ အခြေအနေ တစ်ခုကို ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်တဲ့အခါ လူတွေကို Avoidant , Emotional နဲ့ Problem Focused ဆိုပြီ သုံးမျိုး ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
▪️ ဥပမာအားဖြင့် ဒီ အခန်းထဲမှာ မြွေရှိနေလောက်မယ်ဆိုတဲ့ အထင်နဲ့ ဒီအခန်းနားကိုတောင် မသွားတော့တာ Avoidant Focused ပါ။ ဘာမဆို မလုပ်ဘူး မစမ်းကြည့်ဘူးဆိုပြီး အကြောက်အကန် ရှောင်ရှားတတ်သူတွေပေါ့။ ဒီ အခန်းမှာ မြွေ ရှိရင်တော့ရှိမယ် ဒါပေမယ့် ဒါက အဆိုးကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ဖြေသိမ့်ပြီး အေးဆေးနေနိုင်သေးတာက Emotional Focused သမားတွေပါ။ ဒီအခန်းမှာ မြွေရှိနိုင်တယ်။ ဖွင့်ကြည့်ပြီး လိုအပ်ရင် ရှင်းပစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့ အခြေအနေကို အကောင်းဆုံးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်တာကတော့ Problem Focused သမားတွေပေါ့။
▪️ ဆိုတော့ … ကျွန်တော်တို့က လက်ရှိ Avoidant or Emotion-Focused သမားဖြစ်နေတယ်လို့ ယူဆရတယ်၊ အခြေအနေတစ်ခုကြုံလာတိုင်း ကျရုံးသွားမှာ၊ မှားယွင်းသွားမှာ၊ ထင်သလို ဖြစ်မလာမှာ ကြောက်စိတ် တစ်ခု ကို ဘယ်လို အနိုင်ယူကြမလဲ ? နှစ်မိနစ်လောက်အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်ပေးပါဦးဗျ။
🔸 ဘာကြောင့်ဆိုတာကို အဖြေရှာကြည့်ပါ။
ရွေးချယ်မှု မှားသွားမှာကို ကြောက်တာ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ပြစ်တင် ဝေဖန်ပြောဆိုမှုကိုကြောက်တာ၊ ကိုယ်တိုင် risk ယူမှာ ကြောက်တာ ၊ နောက်ဆုံး အမှားလုပ်မိမှာကိုကြောက်တာ စသဖြင့်ပေါ့။ ကိုယ့်တိုးတက်ရာ အိပ်မက်နောက်ကို မလိုက်နိုင်မိတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ဘာလဲဆိုတာ ကိုယ်တိုင်အဖြေရှာကြည့်ပါ။ Mark Twain ပြောသလိုပေါ့။ ဘဝမှာ ကျွန်တော်က ဘယ်တော့မှ ဖြစ်မလာလောက်မယ့် အရာတော်တော်များများကို စိတ်ပူပင်သောကရောက်နေမိတာတဲ့။ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ လျှောက်ရမယ့်လမ်းမှာ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမယ်လို့ ထင်တဲ့အရာတွေက တကယ်တမ်း ကြုံတွေ့ဖို့ရော အလားအလာရှိရဲ့လား ဆိုတာမျိုး နည်းစနစ်တကျ တွေးခေါ်ကြည့်ဖို့တော့လိုမှာပါ။ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ ဒီလို အကြောက်တရားကို မတွန်းလှန်တော့ဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ပန်းတိုင်တစ်ခုကို လက်လွှတ် အဆုံးရှုံးခံလိုက်ရဖို့ရော ထိုက်တန်လား ဆိုတာ ကိုယ်တိုင် အချိန်ယူ အဖြေရှာကြည့်ပါ။
အောင်မြင်မှု နဲ့ မအောင်မြင်သေးခင်ကြားက ခြားနားမှု တစ်ခုက ကျရှုံးခြင်း ဆိုတာကို Stepping Stone တစ်ခု အနေနဲ့ မြင်တတ်ဖို့ပါ။ ကိုယ်ကြိုးစားလိုက်တယ် ၊ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ထင်သလို ဖြစိမလာဘူး ဒါဟာ ကိုယ်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်က ဆူးခလုတ်တစ်ခုကို ကျော်တက်လိုက်နိုင်တာပါ။ ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကို ပြန်မလျှောက်နိုင်တော့တာမဟုတ်ပါဘူး။ Robert Allen ပြောဖူးသလိုပေါ့။ “ ၤFailure ဆိုတဲ့အရာမျိုး မရှိပါဘူး၊ Feedback ဆိုတာပဲ ရှိတာပါ” တဲ့။ ခံယူတတ်ရင် အရာရာက ကိုယ့်အတွက် အတွေ့အကြုံ ကောင်းပေးနိုင်မယ့် စိန်ခေါ်မှုတွေပါ။
ကျွန်တော်တို့ အခြေအနေတစ်ခုကို ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ဖို့ ဘာကြောင့် ကြောက်နေကြရတာလဲ ရလဒ်ဆိုးထွက်လာမှာ ဘာကြောင့်ကြိုတင်တွေးတော ပူပင်နေရတာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေက ကျွန်တော်တို့မှာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိဘဲ အလျှင်အမြန် စတင်ထားမိလို့ပါ။ ဆိုလိုချင်တာက လူတိုင်းရဲ့ Starting Point ဆိုတာ တူညီကြတာမျိုးမှ မဟုတ်တဲ့အတွက် ပတ်ဝန်းကျင် လူတွေကို ကြည့်ရင်း သူတို့အရွယ်မှာ သူတို့လို ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်ကြီးကို စွန့်လွှတ်ပါ။ ကိုယ့်အတွက် သက်တောင့်သက်သာအရှိဆုံး၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု အများဆုံးသော နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ရင်း ကိုယ်သွားလိုတဲ့ အိပ်မက်လမ်းကြောင်းတွေနောက်ကို တလှမ်းချင်း လိုက်တဲ့အခါ ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ အကောင်းအဆိုးမှန်သမျှကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ သတ္တိအပြည့်ရှိလာမယ်ဆိုတာ သင်ကိုယ်တိုင် တွေ့မြင်နိုင်မှာပါ။
🔸 ကျရှုံးမှုဆိုတာ ခဏတာပါ။
ကျွန်တော်တို့အားလုံးက ဘဝကို စိတ်ကူးအိပ်မက် များစွာနဲ့ အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ အောင်မြင်စွာ ဖြတ်သန်းချင်ကြသူချည်းပါပဲ။ ဒီလို ဖြစ်လာဖို့ ဆိုရင်လည်း ကျွန်တေ်ာ တို့ လျှောက်လှမ်းမယ့် လမ်းက အခက်အခဲ ပေါင်းစုံကို ရင်ဆိုင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ တခါ မအောင်မြင်ဖူး ကျရှုံးသွားတယ်ဆိုတာ ကိုယ်ဘာလုပ်လုပ် အမြဲ ကျရှုံးနေမယ်လို့ မီးမောင်းထိုးပြလိုက်တာမှ မဟုတ်ဘဲလေ။ ပိုမို ကောင်းမွန်ဖို့အတွက် ခေတ္တ ရှုံးနိမ့်လိုက်ရတာမျိုးတွေလည်း ရှိတတ်တာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဆိုးဘက်ကတွေးစေမယ့် ၊ အခြေအနေတစ်ခုကို ရင်မဆိုင်ရဲစေလောက်မယ့် အတွေးမျိုးတွေကို ထုတ်ပစ်ပါ။ ကိုယ်တိုင်ပုံဖော်ခွင့်ရှိတဲ့ တစ်ဘဝစာ အောင်မြင်မှု အိပ်မက်တွေနောက်လိုက်ဖို့ တခဏတာ စိုးရွံမှုတွေကို မေ့ဖျောက်တတ်ပါစေ။
▪️ ဆိုတော့ Fear of Failure ဆိုတာ ရောဂါ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်စိတ်ထဲမှာ သင်ကိုယ်တိုင် ပုံဖော်ထားတဲ့ အသုံးမလိုတဲ့ အတွေးတစ်ခုပါ။
ဒီလို စိတ်ကို ဖြေဖျောက်ဆိုတဲ့ ပြောသလောက်မလွယ်ကူပေမယ့် လက်တွေ့ ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းကြည့်တဲ့အခါ ထင်သလောက်မခက်မှန်း သင့် စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြတဲ့အခါ ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့မြင်ရမှာပါ။
ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ကျရှုံးမှာ ကြောက်စိတ် လာ း?
ဘ၀ အတွက် စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက်တွေလား ?
One Day or Day One …?
အိပ်မက် အားလုံးက သင့် လက်ထဲမှာပါ။